Vydia: Jikwaa ọdịnaya vidiyo gị na ikike dijitalụ | Martech Zone
Vydia bụ ụlọ ọrụ teknụzụ vidiyo Inc 500 nke na-enye ndị okike ike ijikwa ọdịnaya ha na ikike dijitalụ n'ụzọ dị mfe site na otu ikpo okwu etiti etiti.
Ndị na-emepụta ọdịnaya na-enye ike nke vidiyo n'ofe usoro mmekọrịta ọ bụla dị, agbanyeghị, nghọta ha na njikwa ha nwere ọgụgụ isi. Vydia na-enye ndị okike ike site na iji akọ, ngwa zuru ụwa ọnụ jiri nsogbu a dozie nsogbu a. Roy LaManna, Onye guzobere na CEO nke Vydia
Atụmatụ Vydia Agency gụnyere ike:
Kpọọ ndị okike - Zipu ozi na onodu ndị okike gị site na mpempe akwụkwọ Vydia gị wee setịpụ pasent ahọpụtara maka ọnụọgụ ego.
Bipụta iji họrọ ebe - Dunye onye okike ọdịnaya na nyiwe ejikọrọ ozugbo ma ọ bụ dozie oge na ụbọchị.
Nwee Iwu Gị - Họrọ ikwe, Gbochie ma ọ bụ Monetize kere vidiyo dabere na gị video ọdịnaya atụmatụ mgbaru ọsọ.
Akaụntụ Akaụntụ - A na-ekesa ego na akpaghị aka nye ndị nnabata kwesịrị ekwesị. Mfe soro ụzọ ego niile wee chọpụta ndị kacha enweta ego.
Nyochaa ego na arụmọrụ - Nchịkọta maka ndị okike niile, vidiyo ha na nkwupụta UGC, gafee nyiwe niile dị na dashboard zuru ezu.
Ndị karịrị 180,000 ndị egwu, ndị na-eme ihe ike, na ụdị nke ụwa niile jiri rụọ ọrụ, Vydia platform na-enye ọtụtụ ego na ọrụ nkesa nke ndị okike na-enweta nke ọma na desktọọpụ na ngwa mkpanaaka. Vydia bụ ezigbo onye mmekọ nke ndị na - ebipụta dijitalụ dijitalụ dị ka Vevo, Youtube, Facebook na Dailymotion yana netwọkụ dịka BET, MTV, na Choice Music.
Tags: Vidio Ahịaelekọta mmadụ media videouGConye ọrụ mepụtara ọdịnayaihe okike vidiyondị na-emepụta vidiyomonetization vidiyoiwu vidiyovideo ebipụtavydia